ဖိနပ်၊ အမျိုးသားစီးဖိနပ်၊ အမျိုးသမီးစီးဖိနပ် - Ruchun Shoes
လုံခြုံမှု - ဖိနပ်နှင့်တောင်တက်ဖိနပ်များ
ခန့်အပ်ထားသော forwarder သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်း forwarder နှင့်အတူသင်္ဘောစာအုပ်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်စက်ရုံ ၂ ခု၊ အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာအပြည့်ပါသည့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ၃ ခု၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ၃၀၀ ကျော်ရှိသည်။ အဓိကထုတ်ကုန်တွင်အားကစားဖိနပ်များ၊ ပုံမှန်ဖိနပ်များ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်ကလေးတွေအတွက်တောင်တက်ဖိနပ်များပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာအရည်အသွေးမြင့်မားသောဖိနပ်များကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်။
အပိုဒ်အမှတ် .: RCWP202003 ကျား၊ မ - အမျိုးသမီးများ ...
အပိုဒ်အမှတ် .: RCKP202002 ကျား၊ မ၊
Air Cushion ဖိနပ် RCW202001
အပိုဒ်အမှတ် .: RCW202001 ကျား၊ မ၊
Air Cushion ဖိနပ် RCNP202001
အပိုဒ်အမှတ် .: RCNP202001 ကျား - မီးခိုးရောင်, BLAC ...
အပိုဒ်အမှတ် .: RCNP202002 ကျား၊ မ - ကောလို ...
အပိုဒ်အမှတ် .: RCWP202002 ကျား၊ မ၊
အပိုဒ်အမှတ် .: RCKP202001 လိင်: BOYS ဗိုလ်မှူးကြီး ...
အပိုဒ်အမှတ် .: RCNP202003 ကျား၊ မ - ကောလို ...
FuJian JinJiang Ruchun Shoes Co. , Ltd. ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး FuJian ပြည်နယ် Quanzhou တွင်locatedရိယာအကျယ်အ ၀ န်း ၉၆၀၀ စတုရန်းမီတာရှိပြီးအလုပ်သမား ၃၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးများအတွက်ဖက်ရှင်ကျဒီဇိုင်းပါသောကျပန်းအားကစားဖိနပ်ကိုအထူးပြုသည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖိနပ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများ၊ လွတ်လပ်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုစွမ်းရည်များနှင့်ခိုင်မာသော QC အဖွဲ့များရှိသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလက်ကားရောင်းဝယ်သူများ၊ လက်လီရောင်းဝယ်သူများနှင့်အေးဂျင့်များနှင့်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်။ , DUCATI, ချန်ပီယံ, UMBRO, etc
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ၃ ခုပါသည့်စက်ရုံ ၂ ခုရှိပြီးရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောစက်ရုံ ၁၀ ခုကျော်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ခြင်းဆိုသည်မှာတူညီသောပမာဏပေါ် မူတည်၍ အရည်အသွေးတူထုတ်ကုန်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းကိုရွေးချယ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
စက်ရုံသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း BSCI ပြုလုပ်ပြီး ၀ ယ်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ လိုအပ်ပါကအခြားစက်ရုံစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏မေးခွန်းများ (သို့) တုန့်ပြန်ချက်အားလုံးကိုအီးမေးလ်ဖြင့် ၂၄ နာရီအတွင်းအဖြေပေးလိမ့်မည်။ ချက်ချင်းအကြောင်းပြန်ရန်သင်မျှော်လင့်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ WECHAT 0086-13030971530 ကိုထည့်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
Tianqin နည်းပညာအဆောက်အအုံအနောက်အနောက်ဥယျာဉ်၊ Jinjiang, Quanzhou, China
Dad Shoe သည် Milan ရှိအမျိုးသားများအတွက် Digi အတွက်ပြန်လာသည်။
ဖက်ရှင်နှင့်ဖိနပ်ခေါင်းဆောင်များက“ Co ...